Graphite Rods များ
လက်ရှိတွင်၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အထက်ပိုင်းကုန်ကြမ်းဖြစ်သော jinxi low sulfur petroleum coke ၏စျေးနှုန်းမှာ ယွမ် 400 ဖြင့် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပြီး ၎င်း၏ calcined coke ၏စျေးနှုန်းသည် တစ်တန်လျှင် ယွမ် 700 ဖြင့် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။လက်ရှိအချိန်တွင် Jinxi မှ ဆာလဖာနည်းပါးသော Calcined coke ၏ coking စျေးနှုန်းသည် ပြန်လည်မြင့်တက်လာသည်...
ပင်အပ် coke စျေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေကာ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး မျှော်မှန်းချက် မြှင့်တင်ထားသည်။
22-03-03 တွင် admin မှ
တရုတ် ကော်ကိုးတစ်ချောင်း ၅၀၀-၁၀၀၀ ယွမ် ဈေးတက်သည်။စျေးကွက်အတွက် အဓိကအပြုသဘောဆောင်သည့်အချက်များ- ပထမဦးစွာ၊ စျေးကွက်သည် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင် စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ထောက်ပံ့မှု လျော့နည်းသွားခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် အပ်တစ်ချောင်းမှ coke အရင်းအမြစ်များ တင်းကျပ်လာပြီး ဈေးနှုန်းလည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ဒုတိယအချက်မှာ ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်...
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း စျေးနှုန်း မြင့်တက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းနှင့် လမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း။
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရိုးရာလိုအပ်ချက်မှာ အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်မီးဖိုကို သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သံမဏိပြုလုပ်ခြင်း အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကို သန့်စင်ခြင်း လျှပ်စစ်မီးဖိုစတီးလုပ်ငန်း (အတိုကောက်) ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရောစပ်ရန်အတွက် အပူရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး ယေဘူယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်မီးဖိုကို ရည်ညွှန်း၍ လျှပ်စစ်မီးဖိုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
Graphite electrode စျေးကွက်ပေါက်စျေးသည်ယနေ့တည်ငြိမ်သည်။
21-11-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအောက်ပိုင်းလျှပ်စစ်မီးဖိုတွင်စတီးလ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမလုံလောက်ပါ၊ အခြေခံအားဖြင့် 56% ခန့်တွင် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတွင် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်လိုသည်၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုဘက်မှပံ့ပိုးမှုမှာမလုံလောက်ပါ။သို့သော်ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစျေးကွက်ရောင်းလိုအားကတင်းကျပ်သည်၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုတွင်မလုံလောက်ပါ။
ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဝယ်လိုအားပုံစံ တိုးတက်မှုအပြင် ကုန်ကျစရိတ်ပံ့ပိုးမှု ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
21-11-09 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ဒေတာများအရ၊ ပြည်တွင်းဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစျေးကွက်စျေးနှုန်းသည်နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ၂ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုမှာယွမ် ၂၀,၅၆၈ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းသည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။လေ့လာသူများ ထောက်ပြသည်မှာ လက်ရှိ ဂရပ်ဖိုက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ...
22 နှစ်အတွင်း graphitization စွမ်းရည်တွင် ခက်ခဲစွာ ကွာဟချက်ရှိလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
21-11-02 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Inner Mongolia တွင် နောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းမူဝါဒသည် ဂရပ်ဖစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှစ၍ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားရှိ အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် graphitized လုပ်ငန်းများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကောက်ခံမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 20%-3 တိုးလာခဲ့သည်။
ပါဝါကန့်သတ်ချက်သည် အောက်တိုဘာလတွင် cathode graphitization စွမ်းရည် 50% ကျော်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး 80% နီးပါးတိုးလာပါသည်။
21-10-14 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ICC Xinferia Information ကိန်းဂဏန်းများအရ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပြည်တွင်း cathode graphitization စွမ်းရည်၏ 40% နီးပါးသည် Inner Mongolia တွင် စုစည်းနေပြီး စက်တင်ဘာလတွင် အလုံးစုံပါဝါကန့်သတ်ချက်သည် graphitization စွမ်းရည်၏ 30% ကျော်ကို သက်ရောက်မှုရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ဖြစ်လိမ့်မည်...
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ၏ အသားတင်အမြတ်မှာ ယမန်နှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပထမနှစ်ဝက်တွင် 153.01 တိုးလာပါသည်။
21-10-08 တွင် admin မှ
သြဂုတ်လ 24 ရက်နေ့ ညနေတွင် Fang Da Carbon သည် ၎င်း၏ 2021 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဝင်ငွေ ယွမ် 2.364 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 44.57% တိုးလာကာ စာရင်းဝင်ရှယ်ယာရှင်များ၏ အသားတင်အမြတ်ငွေ၊ ကုမ္ပဏီတွေက ယွမ်ငွေ 502 သန်း 153.01% တက်လာခဲ့ပါတယ်..။
Zhejiang University မှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ဂရပ်ဖင်းဖိုက်ဘာကို လွန်ကဲစွာအသုံးပြုခြင်း။
21-07-22 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Graphene fiber သည် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်/အပူထုတ်လွှတ်မှုဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော graphene များကို စနစ်တကျစုပုံကာ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပါသည်။ Zhejiang University ၏ Polymer Science and Engineering ဌာနမှ ပါမောက္ခသည် အောင်မြင်ပြီ...
ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသည် 21 လနီးပါးအတွင်း ၎င်း၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ပြန်လည်ကျဆင်းသွားသည်။
21-07-15 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အလေးချိန်ရှိသော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းသည် 21 လနီးပါးအတွင်း အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ ဆေးထိုးအပ် coke စျေးနှုန်းသည် 18% မှ 27,000 ယွမ်/တန်သို့ ကျဆင်းသွားပြီး၊3လကြာသည့်နောက်ပိုင်း Nashu graphite သည် ယနေ့ 1 ရက်မှစ၍ အနိမ့်ဆုံးအသစ်ဖြစ်သော၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ပြည်တွင်းရှိ အဓိက ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း လုပ်ငန်းများ၏ အထွက်နှုန်းမှာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ 7.4% (Xin Xin တွင် အချက်အလက် ...
Graphite electrode ကုန်ကြမ်း calcined မီးလောင်ရာသို့ပြန်ပြီးစျေးနှုန်း
20-12-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လက်ရှိတွင် ဈေးကွက်တွင် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတွင် အနည်းငယ် အတက်အကျရှိသည်။1. အချို့သော နယ်ပယ်များရှိ အချို့သော လုပ်ငန်းများသည် ရာသီဥတုနှင့် အခြားအကြောင်းများကြောင့် ဖိအားအမျိုးအစားကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအချို့ကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။အစောကြီးကတည်းက ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ လုပ်ငန်းတချို့ ပြန်လည်စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဒီ့အတွက် ကုန်ကြမ်းတွေ၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထောက်ပံ့မှုတွေ၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဈေးနှုန်းတွေ ဆက်တက်နေဦးမှာပါ။
admin မှ 20-12-23 ရက်နေ့တွင်
1. ကုန်ကြမ်းများ တွန်းပို့ခြင်း၊ ရောင်းလိုအား တင်းကျပ်ခြင်း၊ ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း စျေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဈေးကွက်တွင် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုတွင် အနည်းငယ် အတက်အကျရှိပါသည်။1. အချို့သောနေရာများတွင် အချို့သောလုပ်ငန်းများသည် ရာသီဥတုကြောင့် ဖိအားအမျိုးအစားကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအချို့ကို ရပ်ဆိုင်းထားကြသည်။
အဓိက applications များ
ဖက်စ်-၀၃၁၉ ၅၃၁၆၈၅၈ ၈၆